Uluhlu lweencwadi ezincinci zegolide - Malunga Incwadi Zabantwana
Uluhlu lweencwadi ezincinci zegolide
Yaziswa ngoo-1940, iiNcwadi eziNcinci zegolide zenza ukuba iincwadi zibe nokufikeleleka kubantwana abavela kuzo zonke iinkalo zobomi. Amabali abantwana akumgangatho ophezulu ziiklasikhi ezithandekayo kuba abantu abaninzi babelana ngeenkumbulo ezimnandi zokuzifunda. Iincwadi ezintsha zipapashwa rhoqo ukongeza kuluhlu olusele lukhona lwezihloko.
Ngokwe- iwebhusayithi esemthethweni , iiNcwadi zeNcutshe zokuqala zaPapashwa ngo-1942 xa nganye yayithengiswa ngeesenti ezingama-25. Iincwadi ezilishumi elinambini zapapashwa kunyaka wokuqala inye kuphela, I-Poky encinci iPuppy , ukuba ibali lokuqala.
I-Poky encinci iPuppy
I-Poky encinci iPuppy NguJanette Sebring Lowrey - Igama le ethengisa ngokugqibelele Incwadi yabantwana ngalo lonke ixesha, eli bali lakudala limalunga neenjana ezinamanyala eziya kuhlola umhlaba, ngaphandle kwezilumkiso zoonina. Xa bebuyela ekhaya yonke imihla, iinjana zivinjelwa i-dessert. Nangona kunjalo, i-Poky Little Puppy ihlala iyenza ukuba ibe yeyokugqibela ekhaya maxa wambi elungileyo kuye kwaye ngamanye amaxesha ayinjalo.
Amantshontsho ekati amathathu kuboniswe nguMasha -Ulungelelwaniso lwengqokelela yamanesi, ibali limalunga neekati ezintathu ezilahlekelwa zii-mittens zazo, zizenze zingcolise kwaye zihlambe, konke kuhambo lwazo lokutya ipayi.
Amabali okulala kuboniswe nguGustaf Tenggren -Iintsomi ezintathu zeklasikhi malunga Into yokuqabela encinci , Indoda yeGingerbread kwaye Inkukhu encinci Thatha indawo ephambili kule ngqokelela yamabali amafutshane.
Oonobumba A-Z kuboniswe nguVivian Leah Blake - Incwadi enemvano-siphelo enonobumba bonke boonobumba kunye nezinto eziqhelekileyo eziqala ngonobumba ngamnye.
Umama Goose nguPhyllis Fraser - Ingqokelela yeemanyano zabantwana abathandwayo zikaMama Goose ezifana Isidlo sikaPeter Pumpkin kwaye Inkosi endala uCole .
Imithandazo yabantwana NguMary Reed-Ukuqokelelwa kwemithandazo emifutshane, elula abantwana banokucengceleza kwaye babambe ngentloko.
Isikhukukazi Esibomvu Esincinci Kuboniswe nguJP Miller - Ngokusekwe kwinto yentsomi, isikhukukazi sifuna ukunceda ukutyala, ukukhula nokuvuna ingqolowa, kodwa ezinye izilwanyana azizukunceda. Xa esenza isonka ngengqolowa, wonke umntu ufuna ukunceda ayitye.
Iingoma zabantwana Icwangciswe nguLeah Gale -Ingqokelela yeengoma zabantwana ezidumileyo ezinje Umfama eDell kwaye I-Mulberry Bush .
Incwadi yeGolide yeNtsomi kuboniswe nguAdrienne Segur-Ingqokelela yeentsomi eziqhelekileyo zabantwana kubandakanya UJack kunye neMbotyi .
Incwadi Yomntwana kuboniswe nguBob Smith - Jonga ezinye zezinto eziqhelekileyo umntwana azibonayo endlwini.
Izilwanyana zoMfama uJones nguLeah Gale -Izilwanyana zasefama ezilambileyo zifuna umlimi wazo ukuba azondle.
Le Piggy Encinci- Ubonisa isingqisho sokubala 'Le piggy encinci iye kwintengiso ...'
Iincwadi zoonobumba bezilwanyana
Iincwadi eziNcinci eziNcinci
Amabali aBantwana aBangamaNqaku oMdyarho
Izihloko ezidumileyo ezisusela koo-1940
Kwiintsuku zokuqala zokupapashwa, iincwadi zazigxile kwiintsomi ezithandwayo, iintsomi kunye namanye amabali aneendlela zokuziphatha ezilula.
Umvundla omncinci ophilileyo (Ngo-1943) nguMary Reed - I-weasel ingena emngxunyeni womvundla kwaye umvundla omncinci, ngoncedo oluthile kubahlobo, ufumana indlela yokuyika i-weasel kude. Incwadi ithathwa njenge Ukuqokelelwa kweediliya .
Ngokusebenzisa Isakhelo Somfanekiso (1944) Ilungiswe nguRobert Edmunds -Isihloko sokuqala esivela kubambiswano noWalt Disney, oku kukuphindwaphindwa kwentsomi kaHans Christian Andersen u-Ole Lukoie malunga nothixo wephupha okanye umntu wesanti onika abantwana amaphupha.
Tootle (Ngo-1945) nguGertrude Crampton-Ibali lilandela uloliwe omncinci ophazamiseka lula kwiinjongo zakhe. Ngoku ka IVeki yoMpapashi yeVeki , ukusukela ngo-2001, le yayiyinombolo yesithathu kuluhlu lweencwadi ezithengisa kakhulu zabantwana ngalo lonke ixesha.
Isikwere iTugboat (Ngo-1946) nguGertrude Crampton-Isikhephe esincinci sokudlala asifuni kuhlala kwivenkile yokudlala, ke uya emhlabeni aye kufuna indawo yakhe. Abafundi, abaneminyaka emibini ukuya kwemihlanu, bayayithanda i-adventure kunye novakalelo kolu luhlu luthandwayo njengodidi lokudala kwiwebhusayithi esemthethweni.
Elephants (Ngo-1947) ngu-Byron no-Katherine Jackson-Abanye bahlekisa ngesinye isilwanyana bashiya uSooki indlovu iziva ingonwabanga. Xa edibana nezinye izilwanyana ezinempawu ezifanayo nezakhe, ufunda ukuzithanda. Le ncwadi yeyona ncwadi yesixhenxe yabantwana abathengisiweyo ngalo lonke ixesha ngokweedatha IVeki yoMpapashi yeVeki .
Mnyama omncinci uSambo (Ngo-1948) nguHelen Bannerman -Ibali malunga nenkwenkwana encinci yaseIndiya edibana neengwe ezililize. Unika izingwe zonke iimpahla zakhe ukuze athembise ukungamtya. Amahlosi ayalwa kwaye inkwenkwe iyaphumelela ekulweni kwawo. Ibali liya kuba kamva embindini we imbambano yobuhlanga kwaye ziye zavalwa kwiindawo ezininzi.
Kule minyaka ilishumi, iiNcwadana eziNcinci zegolide ziyaqhubeka kwimishini yabo yoqobo yokuzisa iincwadi ezisemgangathweni kubo bonke abantwana. Iincwadi zihlala zifunyanwa kufutshane nokuphuma kweevenkile ukuloba abantwana kunye nabazali ukuba bathenge.
I-Tawny Scrawny Lion
Ndingabhabha (Ngo-1950) nguRuth Krauss -Umxholo omnandi, onesingqisho ubonakalisa intombazana encinci eyenza yonke into ngathi zizilwanyana ezinako ukuyenza.
I-Tawny Scrawny Lion (Ngo-1952) ngu-Kathryn Jackson- Le ncwadi iphonononga iintsuku zeveki nendlela olunye usapho lwemivundla oluye lwaqinisekisa ngayo ingonyama etya inyama yomnqatha endaweni yayo. Idweliswe njengenombolo ye-117 kwi IVeki yoMpapashi yeVeki Uluhlu oluthengisa kakhulu.
Caboose encinci ebomvu (Ngo-1952) nguMarian Potter-A Umzali Co. Eyona nto iphambili kwi-10 yeNcwadi eNcinci ethandekayo eNcinci, eli libali elilula lecaboose elifuna ukuba yinkokheli njengenjini de lifumane amandla alo awodwa.
Abahlobo bezilwanyana (Ngo-1953) nguJane Werner Watson -Ibali malunga nendlela izilwanyana ezihlala ngayo nezinto ezenza ikhaya, le yinto ethandwayo ngokufundwa kwindawo kaSteve Santi.
Iipesenti ezi-5 zokuSebenzisa (Ngo-1955) nguMiriam Young-Inkwenkwana inesenti ezintlanu ekufuneka izisebenzisele yona, kodwa abanye babahlobo bayo bafuna ukuthenga izinto. Incwadi idweliswe njengesihloko esidumileyo yingqokelela yengcali, uSteve Santi.
Igadi yomntwana yeeVesi (1957) nguRobert Louis Stevenson -Isihloko esithandwayo sibandakanya imibongo yentsusa malunga nobuntwana ngokuchazwa kwendalo.
Iincwadi ezidumileyo kwii-1960s
Ngexesha eliphakathi ukuya ngasekupheleni kweminyaka yee-1950s umabonwakude waba yinto ephambili kwindlu. Olu tshintsho kunikezelo lokonwaba lube negalelo ekuzisweni kweencwadi ezisekwe kubalinganiswa abaziwayo beTV.
Ubusuku obuLungileyo Bhere elincinci
Umntwana Umamele (1960) ngu-Esther Wilkin - Usana oluncinci luva izandi ezahlukeneyo endlwini.
Ubusuku obuhle, Little Bear (1961) nguPatricia Scarry- Imfihlakalo eyonwabisayo ngexesha lokulala xa uBawo uBhele engayifumani iBhele encinci njengoko ejonga endlini. Umbhali wayetshatile kumbhali / umbonisi wabantwana uRichard Scarry.
IHuckleberry Hound kunye nabahlobo Bakhe (1960) nguPat Cherr -Ubonisa inja eyaziwayo kumabonwakude, ibali limalunga nokuba kutheni uHuckleberry enomsindo nabahlobo bakhe emva kosuku lweentlanganiso kunye nemisebenzi. Uluhlu lweencwadi ezisemthethweni zeNcwadi zeGolide ezincinane zidwelise esi sihloko kwimbali yazo.
Amatye eFlintstones (1961) nguMel Crawford-Dibana nosapho lomqolomba kunye nesilwanyana sasekhaya esitsha, esinokuba ngaphezulu kunosapho olunokuphatha. Iwebhusayithi esemthethweni iyaphawula oku njengesihloko esithandwayo sexesha.
Mhle Mncinci, Ntombazana encinci (Ngo-1965) ngu-Esther Wilkin-Landela imisebenzi yentombazana encinci elungileyo kunye nentombazana encinci embi, eyenzeka nje yangumntu ofanayo.
Khawuleza, Khawuleza, lixesha lokulala (Ngo-1968) yiPeggy Parish- Jonga indlela izilwanyana ezahlukeneyo ezilungela ngayo ukulala.
Izintandokazi Ukusukela koo-1970
Ukongeza kubalinganiswa abaziwayo beTV, iithoyi ezidumileyo zenza indlela yazo kwezi ncwadi.
I-Monster ekupheleni kwale ncwadi
Ungalitshintsha njani ixesha kwiwotshi yedijithali ye-casio
UCharlie (Ngo-1970) nguDiane Fox Downs-Landela uhambo lwekati encinci egqiba ukujonga nokusebenzela ubomi obungcono.
Iindwangu (Ngo-1970) nguPatricia Scarry -Ukufumana inja entsha kukuzonwabisa, ngakumbi kuMnu noNksk. Kalabany kweli bali lezilwanyana zasekhaya.
I-Monster ekupheleni kwale ncwadi (1971) nguJon Stone-Le kuphela kweNcwadi eNcinci yeGolide ebonakala ngoku Iincwadi ezili-100 zeZithombe zexesha lonke uluhlu ngu Ijenali yeThala leencwadi leSikolo . Umlingiswa weSitalato saseSesame uGrover ukhathazekile kuba weva ukuba kukho inyoka ekupheleni kwencwadi ke ngoko uzama ukukhuthaza abafundi ukuba bangawavuli amaphepha.
UJolly Barnyard (Ngo-1973) ngu-Annie North Bedford - Izilwanyana zizama ukubhiyozela usuku lokuzalwa lukaFama uBrown kule Phepha-3 leNcwadi eziThandwayo eziNcinci eziNtsundu zithi Parent Co.
UBarbie (Ngo-1974) -Incwadi yokuqala epapashiweyo enodoli othandwayo, eli bali lilandela umhambi wenqwelomoya uBarbie ngomhla wakhe wokuzalwa.
Izihloko ezidumileyo ezisusela kwiminyaka yoo-1980
Ngeli xesha leminyaka abafundi babona umxube olungileyo okanye amabali wokuziphatha kunye nezo zinabalinganiswa obathandayo. Uya kufumanisa ukuba uninzi lwezi zihloko zikho kwisitokhwe okanye zidweliswe kweyona xabiso libiza kakhulu ngenxa yokuthandwa kwabo okanye ukunqaba kwabo.
Iintloko zeMickey Mouse zeSibhakabhaka
Ivenkile eThengwa (1983) nguLois Meyer- Intombazana encinci ifumana unodoli omtsha kwivenkile ukuze ithathe indawo yayo, kodwa ifumanisa ukuba endala ingangcono.
Izilo ezinobuhlobo (1983) - Umbongo weKrisimesi malunga nobudlelwane phakathi kwezilwanyana kunye nosana olunguYesu.
IiDalmatiya ezili-101 (Ngo-1985) ngu-Dodie Smith - Xa ii-Dalmatians ezimbini zaqala ukubuyisa iintsana zazo kwisikhohlakali esibi, bafumana injana ezininzi kunokuba babecinga.
Usuku lolwandle (1988) nguFran Manushkin-Landela uhambo lwentombazana enye encinci njengoko ehlola ulwandle.
Iintloko zeMickey Mouse zeSibhakabhaka (1987) -UMickey Mouse uyakuthanda ukufunda ukubhabha, kodwa ngaba uyakuthanda kakhulu?
I-Bugs Bunny kunye neHog yezeMpilo (Ngo-1986) nguTeddy Slater -I-Bugs Bunny iqinisekisa iPorky Pig ukuba isebenze naye, kodwa kungekudala iPorky isebenza ngaphezulu kweeBugs. Ke, ii-Bugs zidlala amaqhinga okubuyisela umhlobo wakhe kwiindlela zabo zakudala.
Iimovie, umabonwakude, kunye nabalinganiswa bezinto zokudlala bathatha inqanaba eliphakathi ezincwadini ukusukela kule minyaka ilishumi. Ukusebenzisana neenkampani ezinkulu ezineempawu zabantwana ngoku sisiseko sesibheno seNcinci yeGolide.
Usuku Olubi Nje
I-Mermaid encinci: I-Ariel's Underwater Adventure (Ngo-1990) nguMichael Teitelbaum-Dibana nenkosazana yolwandle efuna ukubona ukuba kunjani ukuhlala emhlabeni nabantu njengoko elwa nobubi kwaye ethandana. Enye yeencwadi ezininzi zeenkosazana zeDisney esekwe kwimovie, le nto ayipheli kwaphela kwisitokhwe kwiiKlasikhi zaBantwana.
Eeyore, Yonwaba (1991) nguDon Ferguson- Ngaba uWinnie the Pooh kunye nabahlobo bangayifumana indlela yokwenza u-Eeyore angabi yinto entle kangaka? Ibali likaPooh eliqhelekileyo libetha # 53 kwi Ukufundwa kweencwadi eziGqwesileyo zeNcwadi eziGolide uluhlu oluvotelwe ngabafundi.
Idiski eDarkwing emnyama: I-Silly Canine Caper (Ngo-1992) nguJustine Korman Fontes -I-superhero yekhathuni eyaziwayo kunye ne-sidekick yakhe ifuna ukusombulula imfihlakalo yokuba kutheni iiarhente zingazigqibi iintlanganiso zazo. Abavoti beGoodreads ekubhekiswe kubo ngasentla bavote oku njenge- # 65 kuluhlu lweeNcwadi eziBalaseleyo zeGolide.
UWalt Disney's Umfundi oSebenzayo (1994) nguDon Ferguson -Uphefumlelwe ngumboniso ovela kumdlalo bhanyabhanya uFantasia, uMickey ufunda umlingo kwaye uzama ukuzisebenzisa ngaphandle kokuya kwiingcebiso zikatitshala wakhe. Iifayile zokufunda zabavoti zibiza le klasiki njenge- # 21 kuluhlu olungcono olukhankanywe ngaphambili.
Usuku Olubi Nje (1993) nguGina kunye noMercer Mayer- Umgxeki omncinci ngu ethandwayo Umlinganiswa kwiintsomi zabantwana Kweli bali akanakufumana ikhefu njengoko kungekho nto ikhangeleka ihamba njengoko bekucwangcisiwe. Jonga ukuba angalujika na usuku olubi lube lolungileyo.
I-Pokemon: I-Mewtwo ibetha umva (1999) nguJustine kunye neRon Fontes- Eli bali lisekwe kwibhanyabhanya yokuqala yePokemon apho uAsh kunye nabahlobo bakhe kufuneka basindise umhlaba kububi uMewtwo. Inkqubo ye- i-franchise eyaziwayo I-Pokemon ijoyina uluhlu lwentsebenziswano kunye neeNcwadi zeGolide ezincinci.
Ekuqaleni kwee-2000 izihloko ezidumileyo
Njengoko iincwadi ziyaqhubeka ziye kolunye ulishumi, ezinye iintandokazi ezindala ziphinde zaphindwa zenziwe kwaye iiseti zebhokisi zenziwe ngeencwadi ezizithandayo ezivela kwimixholo ethile.
Disney iKing King
UBarbie, uRapunzel (2001) nguDiane Muldrow-Ngokusekwe kwiintsomi ezithandwayo, imifanekiso ibonisa oonodoli bakaBarbie kwizimo ezahlukeneyo ngokuchasene nemizobo yekhathuni.
Ufudo walufumana njani igobolondo lakhe (2001) nguJustine kunye neRon Fontes -Funda malunga neenquba ezinenyani emfutshane kunye neentsomi ezivela kwiinkcubeko ezininzi. Isihloko siphelile ngokusisigxina kwiiKlasi zamaNtwana, ezikhankanywe apha ngasentla.
Mnumzana Inja (2003) nguMargaret Wise Brown -Dibana noCrispian's Crispian, inja eyeyakhe njengoko efumanisa inkwenkwana ekwangokwakhe. Umbhali ngu yamkelwe Umbhali wabantwana oneencwadi ezingaphezu kwe-100 ezibhaliweyo ngaphambi kokuba asweleke.
Disney iKing King (2003) -nguJustine Korman -Incwadi ebalisa ibali lomdlalo bhanyabhanya wabantwana okwelo gama ulandela ingonyama uCub Simba kwaye ufunda ngendlela elisebenza ngayo ilizwe. Inkqubo ye- I-Disney Classics Box Set kubandakanya oku njengelinye lamabali amahlanu akhethiweyo athatyathwa 'njengabathandekayo.'
Inkwenkwe kunye neeNgwe (2004) nguHelen Bannerman -Ukubaliswa kwakhona kweklasikhi Mnyama omncinci uSambo inamagama amatsha kunye neenkcazo zomlinganiswa ukuzama ukwenza ukuba ibali lingacaphuki kwezinye iinkcubeko kunye nobuhlanga. Njengokubhekiswa ngaphambili kwesihloko sokuqala, eli bali belisembindini wempikiswano kwimbali yobudlelwane bobuhlanga.
IPaddington kwiZoo (2010) nguMichael Bond - The ethandwayo Uhlobo lwebhere, uPaddington, iintloko ukuya kumyezo wezilwanyana kunye neesandwich zakhe azithandayo. Kodwa, ayinguye kuphela othanda ezo sandwich.
Iincwadi ezincinci zeGolide zibhiyozela iminyaka engama-75 yokupapashwa ngo-2017 kwaye ziyaqhubeka nokufuna ubuhlakani kunye neempawu zabalinganiswa ezintsha ngelixa kugcinwa kugxininiso kwizifundo ezibalulekileyo zabantwana.
I-Star Wars encinci yeThala leeNcwadi -Yapapashwa ngo-2015 le seti yeencwadi ezintandathu, nganye ibonisa ibali elivela kwi-movie ye-Star Wars yokuqala kunye ne-sponge yegolide, yinto yokuqala yokubonakala kwe-franchise eyaziwayo kwifom ye-Little Golden Book. Isihloko sibonakalisiwe kwiNcwadi yeGolide eNcinci yegosa elisemthethweni elichazwe ngaphambili.
Iphupha leMisebenzi yoQeqesho lweNyoka yakho (2017) ngu-Devra Newberger Speregen -Kusekwe kumdlalo bhanyabhanya okweli gama ubuye abelane ngendlela uHiccup ahlangana ngayo nomhlobo wakhe osenyongweni kunye nenamba, engenazinyo. I-DreamWorks encinci iThala leeNcwadi kubandakanya esi sihloko njengenye yeentandokazi ezintlanu ezivela kwi-movie enkulu.
Isimilo - Ikhutshwe ngo-2017, eli bali elingazange lipapashwe ngumbhali othandekayo, uMargaret Wise Brown, weeklasikhi ezinje ngeGoodnight Moon, ufundisa imilinganiselo esisiseko yabantwana basebenzisa izinto ezichaseneyo.
Umshicileli wePenguin Random House wabelana ngokukhutshwa okuzayo kweencwadi zeNcinci zegolide.
Usuku lokuzalwa lweBunker (EyoMqungu) nguDavid Lewman - umlingisi webhanyabhanya kaTroll, amasebe, abahlobo bamphosela itheko lokuzalwa nokuba uyalifuna okanye akafuni.
Amabali eDisney Princess Babysitter (ngoJanuwari) -Ibonisa amabali amahlanu eenkosazana zakho ozithandayo zeDisney njengabahlali bentsana.
Ipaki yeJurassic (EyoMdumba) ngu-Arie Kaplan -Ibali lencwadi elifanele iminyaka yobudala kwifilimu kaSteven Spielberg malunga nendoda ebuyisela iidinosaurs ebomini epakini.
Ngelishwa, ukufumana uluhlu olupheleleyo lweeNcwadi eziNcinci zegolide kwi-Intanethi kunzima kuba ingqokelela ngoku ibandakanya ngaphezulu kwe-1,200 yezihloko ezizodwa. Nangona kunjalo, Umqokeleli weNcwadi eNcinci wegolide Iwebsite ibandakanya uluhlu lwee-alfabhethi lwee-1,230 zeNcwadi eziMncinci zeGolide ezaqulunqwa ngo-2013. Ubungqongqo ikwabonelela ngoludwe lwee-alfabhethi lweNcwadi eNcinci yeGolden Encwadi enegalelo ngabalandeli nabaqokeleli rhoqo.
Ukuba ufuna ukuqokelela iiNcwadi eziNcinci zegolide, chola ikopi Iincwadi ezincinane zeWarman: Ukuchongwa kunye nesiKhokelo samaxabiso NguSteve Santi. Esi sikhokelo sibonelela ngeengcebiso zokuvavanya ixabiso lencwadi ethile kunye nolwazi malunga nezona zihloko zixabisekileyo zeNcinci yeGolide eNcinci. Ukufumana imbali ebanzi yeencwadi, jonga Ilifa legolide: Ibali leencwadi zegolide NguLeonard Marcus.
Iincwadi zakudala zaBantwana
Iincwadi ezincinci zeGolide zaguqula ukufikeleleka kweencwadi zabantwana ngokunikezela ngamabali asemgangathweni ngamaxabiso afikelelekayo. Ngaphezulu kweminyaka engama-75 ezi ncwadi zembonakalo yolonwabo zivuyisa abafundi bayo yonke iminyaka.
Iimoto Nee Iimoto Isisa Slideshows Enye Indlela Izinwele Funda Isifrentshi Ihalloween Makeup Techniques
amagama amakhwenkwe athetha uthando namandla
Iintsuku ezili-12 zoluhlu lwezipho zekrisimesi
bahlala ixesha elingakanani abantu abane-autism
uyifumana njani i-2 yeedola
ingaba iipisces zikhangeleka njani
Isebenza njani i-hydrogen peroxide njengesibulala-ntsholongwane